हाम्राे पिपलबाेट » शुद्ध पानी पिउने अभियान थालनी गरौँ : महासंघका कोषाध्यक्ष रावत शुद्ध पानी पिउने अभियान थालनी गरौँ : महासंघका कोषाध्यक्ष रावत – हाम्राे पिपलबाेट
शुद्ध पानी पिउने अभियान थालनी गरौँ : महासंघका कोषाध्यक्ष रावत
मानव जीवनका लागि पानी नभई नहुने कुरा हो । हेर्दा पानीको न त कुनै रंग छ न त कुनै स्वाद नै छ । यहि रंग र स्वादबिनाको तरल पदार्थ ‘पानी’ हाम्रो जीवनका लागि अत्यावश्यक छ । हामी पानी जतिवेला चाहियो, जति चाहियो त्यति मात्रामा पानी पिउन पिउछौँ । तर शरीरलाई आवश्यक हुन्छ भन्दैमा पानी जथाभावी पिउनु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन । हामीले पानी पिउँदा कहिले, कसरी र कति मात्रामा पिउने भन्ने कुरा जान्नु आवश्यक हुन्छ । पानीका केबल फाइदा मात्रै हुँदैनन् । पानी पिउने उपयुक्त तरिका नजान्दा यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई हानी पनि गर्न सक्छ । मानव शरीरमा करिब ७२ प्रतिशत पानीको मात्रा रहेको हुन्छ । हामीले खाने खाना जति नै स्वस्थकर भएता पनि सहि मात्रामा पानी नपिउनाले शरीरमा अपच, कब्जियत, ग्याष्टिूक, कलेजो सम्बन्धी समस्या, आलस्यता, किड्नीका पत्थरी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी, दाल, छालाको एलर्जी, चर्मरोग र टाउको दुख्ने जस्ता समस्या देखिन सक्छन्।आम मानिसहरुले स्वच्छ पानी नपिउनाले विभिन्न किसिमका रोगहरुले पिडित भएका उदाहरणहरु थुप्रै भेटिन्छन् । स्वच्छ पिउने पानी पिउने बानी अझैँ मानिसहरुमा बसिसकेको छैन । यसै विषयमा बाँके जिल्लामा रहेको खानेपानी उपभोक्ता महासंघले शुद्ध पिउन पानीका लागि के कस्ता गतिविधीहरु संचालन गरिरहेको छ पानी कसरी कस्तो पिउने भन्ने बारेमा खानेपानी महासंघ बाँकेका कोषाअध्यक्ष याम बहादुर संग पीपलबोट दैनिकका रिर्पोटर स्याम विष्टले गरिएको सक्षिप्त कुराकानी :
(क) तपाईको परिचय ?
नमस्कार म याम बहादुर रावत खानेपानी महासंघ जिल्ला शाखा बाँकेको कोषाअध्यक्ष पदमा रहेर काम गरिरहेको छु । स्वच्छ खानेपानी आम उपभोक्ताले पिउन भन्ने हाम्रो उदेश्य साथ हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहेको छ ।
(ख)खानेपानी महासंघ बाँकेले के कस्ता गतिविधीहरु संचालन गरिरहेको छ ?
विशेषगरी खानेपानी महासंघ बाँकेले बाँके जिल्लाका उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिकामा आम उपभोक्ताहरुलाई शुद्ध पिउने पानी पिउनुपर्छ भन्ने जनचेतनामूलक सन्देश दिदै हिडेका छौँ । यकातर्फ शुद्ध पिउनेपानीका लागि माग भइ आएका स्थानिय तहका विभिन्न ठाँउहरुका भौतिक पूर्वाधार निर्माण ,मर्मत सम्भारका लागि विशेष कहल कदपीहरु चालिरहेका छौँ ।
(ग) बाँके जिल्लाको हकमा शुद्ध पानी पिउनबाट कति प्रतिशत नागरिकहरु बञ्चित छन् ?
प्रश्नका लागि धन्यवाद । बाँके जिल्ल्लाको हकमा पहिले पहिले मानिसहरु खोलाको पानी, इनार, कुवा लगायतका ठाँउहरु पानी पिउने अवस्था थियो । अहिले अधिकाश मानिसहरु शुद्ध पिउने पानीको लागि फिल्डरको प्रयोग, खानेपानी संस्थाले वितरण गरेको पानी प्रयोग गरिएको पाइन्छ । यसो भनिरहँदा अधिकाश मानिसहरु अझैपनी शुद्ध खानेपानीबाट बञ्चित रहेको अवस्था यर्थात हो । आर्थिक तथा विपन्न वर्गहरुको बसोबास रहेको क्षेत्रमा अझैपनी शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थापन नभएको देखिन्छ । करिब ५० प्रतिशत मानिसहरु शुद्ध पिउने पानीबाट बञ्चित रहेको अवस्था देखिन्छ । बैकल्पिक विधी अपनाएपनी उपभोक्ताहरुले शुद्ध पानि पिउनुपर्छ भन्ने चेतना अझै कमी देखिन्छ ।
(घ)खानेपानी महासंघले शुद्ध पिउने पानीका लागि तपाईहरुको रणनैतिक योजना के हो ?
बाँके जिल्लामा जनसंख्याका हिसाबले दिनप्रतिदिन थप हुँदैछ । अर्कोतर्फ खानेपानीका संस्थाहरु आवश्यकता भन्दा कम छन् । यसका लागि राज्यले पनी आम नागरिकका लागि शुुद्ध पिउने पानीका लागि निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधारमा विशेष चासो दिनुपर्ने देखिन्छ । महासंघको तर्फबाट हामीले स्थानिय तहसंग र जिल्ला खानेपानी डिभिजन कार्यालय संगको सम्वन्य निरन्तर गरिरहेका छौँ । कामहरु पनी भैरहेका छन् । संघको विशेष रणनिती भनेको नै सबै नागरिकहरुले शुद्ध पिउने पानी उपभोग गर्न पाउनुपर्छ र त्यो वातावरण सिर्जना गर्नका लागि नै महासंघले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको अवस्था छ । अहिले हरेक स्थानिय स्तरमा कार्यसमितीहरु छन् । कार्यसमितीले शुद्ध पिउने पानीका लागि कहाँ अभाव भइरहेको छ कहाँ मर्मत गर्नुपर्ने हो यस विषयमा हाम्रो समन्वय सहकार्य भइरहेको छ । संघको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार आफ्नो रणनैतिक योजनाहरु क्रमस अगाडी बढिरहेका छन् । नेपालगञ्ज उपमहागरपालिका, बैजानाथ, राप्तीसोनारी , डुडुवा, नरैनापुर,कोहलपुर नगरपालिका,खजुरा गाँउपालिकामा शुद्ध खानेपानीका लागि ठूला पूर्वाधारहरु निर्माण भइरहेका छन् । योजना निर्माण संगै संघको पनि उत्तरदायित्व हो भन्ने हेतुले हाम्रा कार्ययोजना पनि अगाडी सारेका हौँ ।
(ङ)तपाईको बुझाईमा शुद्ध खानेपानी किन प्रयोग गर्ने ?
शरीरलाई खानाजस्तै पानी पनि आवश्यक छ । शरीरलाई स्वस्थ राख्न पानी पिउने समय र तरिकाबारे थाहा पाउनु जरुरी छ । शरीरमा आवश्यक पानी भएन भने विभिन्न रोगको जोखिम बढ्न सक्छ । हामीले खाएको पोषक तत्व रगतमा पुर्याउन र शरीरको विजातिय तत्व बाहिर निकाल्न पानीको भुमिका रहन्छ । शरीरको ७६ प्रतिशत भाग पानीले बनेको हुन्छ । पानीमा तरलता, स्वच्छता, हलुकापन, शीतलपनजस्ता गुणहरू हुन्छन् । पानीको कमीले शरीरभित्र मात्र होइन, शरीरबाहिर छालामा पनि नकारात्मक असर देखा पर्न सक्छन् ।
(च) शरीरमा पानीको उचित मात्रा कति हुन्छ ?
शरीरमा पानीको मात्रा फोक्सो ९० प्रतिशत, रगत ८२ प्रतिशत, छाला ८० प्रतिशत, मांस पिण्ड ७५ प्रतिशत, मष्तिष्क ७० प्रतिशत, हयी २२ प्रतिशत रहेको हुन्छ ।प्रत्येक मानिसलाई साधारणतया दैनिकरूपमा तीन देखि चार लिटर वा १०÷१२ गिलास पानी आवश्यक पर्छ । यो मात्रा स्थानीय हावापानी, तापक्रम, व्यक्तिको श्रमको अवस्था आदिमा भर पर्छ । यो कुरा व्यक्तिको प्रकृति, जीवनशैली आदिमा पनि भर पर्छ । धेरै पानी पिए पनि खतरा हुन सक्छ । कम पानी पिए फोहोरलाई बाहिर निष्कासन गर्न गाह्रो पर्छ । जसको पेट सफा हुन्छ, उसलाई रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ । ठिक तरिकाबाट पानी पिउनाले बिषाक्त तत्व पनि बाहिर निष्काशन गर्न सक्छ ।
कहिले धेरै, कहिले थोरै पानी खानु हुँदैन । खानेकुरा र पानीको मात्रा मिलाएर मात्रै सेवन गर्न जरुरी छ । सधैँ केही समयको अन्तर राखी पानी पिउने गर्नुपर्छ । जति धेरै पानी बाहिरिन्छ, उति धेरै पानी पिउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । पानीसँगै झोल पदार्थ भएका
खानेकुरा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । फलफूल, सागपात प्रशस्त मात्रामा खाने गर्नुपर्छ । शरीर स्वस्थ राख्न रसिलो फलफूल खानुपर्छ ।
(छ) उचित तरिकाले पानी पिउँदा हुने फाइदा के हुन ?
पानी शरीरमा सिंचिंत भइ बल, आय, आरोग्यता र पौष्टिकता प्रदान गर्छ । यसलाई आयुप्रदाता, प्राण र रसायन मानिएको छ । पेट सफा गर्न पानीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पटक(पटक गरी दिनभर पिएको पानीले क्यान्सरका सेललाई समेत बाहिर निकाल्छ । पानिको उचित प्रयोगले धेरै विकार नष्ट हुन्छन् । दिसापिसाब, पसिना, थुकलगायत माध्यमबाट शरीरको पानी बाहिरिन्छ । शरीरमा पानीको कमी भयो भने विभिन्न रोग लाग्न सक्ने चिकित्सक हरुले समेत बताएका छन् । बिहान उठ्नेबित्तिकै मनतातो पानी पिउने गर्दा शरीरका अर्गान खुल्छन् । यसले स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्छ । स्वस्थ छालाका लागि पनि शरीरलाई आवश्यक मात्रामा पानी पिउने गर्नुपर्दछ । स्वच्छ पिउने पानी ठिक ढङ्गले सेवन गरे र दैनिक कम्तिमा तीन लिटर पानी पिए क्यान्सरलगायत रोगबाट छुटकारा पाइन्छ ।
(ज) पानी कम हुँदा देखिने समस्या के हो ?
पानी कम हुँदा छालामा असर पर्छ । छालामा सुक्खापन आउने, चाउरी पर्नेजस्ता समस्या देखा पर्न सक्छन् । यति मात्रै होइन, शरीरमा एलर्जी हुन सक्छ । रगतको मात्रामा कमी, कमजोर पाचनतन्त्र, शरीरको तापक्रम बढ्ने, महत्वपूर्ण संवेदनशील अङ्गमा असर पर्ने आदि समस्या हुन्छ । लामो समय पानी नपिउँदा कहिलेकाहीँ मानिस बेहोस हुन सक्छ । ठीक समयमा पानी पिउन सकिएन भने ज्यानसमेत जान सक्छ । पानीको मात्रा भएन भने बेहोस हुने, खुट्टा फर्कने, थकाइ लाग्ने, टाउको दुख्ने, झर्को लाग्नेजस्ता समस्या देखा पर्ने हुन्छ । पानीको कमी हुँदा किड्नीमा समस्या, पिसाबको संक्रमण हुन्छ । पानी एकैपटक धेरै खाँदा किड्नीमा ओभरलोड हुन्छ र समस्या उत्पन्न हुन्छ । शरीरमा पर्याप्त मात्रामा पानी पुगेन भने कब्जियतको समस्या हुन्छ ।
(झ) स्थानिय तहमा उपभोक्ताहरुलाई शुद्ध पिउने बानीका बारेमा कसरी प्रशिक्षण दिइरहनुभएको छ ?
शुद्ध पानी पिउनुहोस भन्ने अभियाका साथ बाँकेका सबै स्थानिय तहमा हामी पुगेका छौँ । आम उपभोक्ताहरुबाट पनि राम्रो सुझाब सल्लाह पाएका छौँ । उपभोक्ताका गुनासाहरु थुपै सुनिन्छ । शुद्ध पानी पिउनका लागि कम्तिमा एक घरमा १ फिल्टरको पनि निकै आवश्यक देखिन्छ । जसका कारण परिवारका सबै सदस्यहरुले समेत शुद्ध पानी पिउन सक्छन् । बाँकेका कतिपय ठाँउहरु अति बिकट पनि छन् । त्यस्ता ठाँउहरुमा खानेपानीको अभाव संगै शुद्ध पिउने पानीको पनी समस्या छ ।
(अ) दैनिक उषापान गर्दा हुने फाइदा चाँही के हुन ?
एउटा ठूलो बाढीको रूपमा बगाएर मुखदेखि मलद्वार सम्मको (विजातीय) पदार्थलाई पगालेर फाल्ने गर्छ । ठोस रूपमा रहेको पदार्थलाई तरल बनाएर बाहिर निष्काशन गर्ने काम गर्छ, जसले हाम्रो पेट सफा गर्छ । पानीको मात्रा पूरा गरेर जलबियोजनबाट बचाउँछ । उषापान गर्नाले हाम्रो शरीरमा एक प्रकारको शक्ति जागरूक हुन्छ । र, त्यस शक्तिले रोगको हरण गर्छ । जीवनी शक्तिको वृद्धिले रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास गराउँछ । उषापान विशेष गरी अजीर्ण वा मलबद्धता, पाइल्स, सङ्ग्रहणी मन्दाग्नि, उदरशुल, कम्लपित्त आदि रोगको लागि अत्यन्त फाइदाजनक छ । यो मूत्रविकारको लागि त रामवाण नै हो । पत्थरी, मृगौलासम्बधी रोग लाग्न पाउँदैन । पिनास, नाथ्री फुट्ने, टाउको दुख्ने, रूघाखोकी आदि रोगबाट मुक्ति दिलाउँछ । रगत शुद्ध पारी स्मरणशक्तिको विकास गराउँछ । वीर्यसम्बधी रोगहरू रहन पाउँदैन । कालोपोतो, चायाँ र डन्डीफोरआदि समस्याको समाधान हुन्छ, छाला सुन्दर हुन्छ । मनका चिन्ता शान्त बनाउँछ । पित्त प्रकृतिको व्यक्तिले यदि प्रातःकाल विस्तारबाट उठ्नेबित्तिकै आधा लिटरभन्दा बढी चिसो पानी पिउने गर्छ भने उसको लागि यो अमृत हुन जान्छ । मेटाबोलिजम राम्रो हुन्छ । उषाकालमा गरम पानी पिइयो भने मोटोपन कम हुन्छ, गरम पानीमा गौमूत्र एक वा दुई बिर्को मिलाइ पिइयो भने कब्जियत नास हुन्छ । तर, जोर्नीको दुखाई हुनेले चिसो पानी पिउनु हुँदैन । अतः उषापान एक प्रकारको अमृतपान हो । जसको प्रयोगले मानव शरीरलाई पूर्ण निरोगी बनाउँछ । त्यसैले उषापान स्वास्थ्य जीवनको प्रमुख आधार हो । तर १ घण्टासम्म केही पनि खानु हुँदैन । उषापान (खाली पेटमा ःपानी पिउने) वा अमृतपान जसमा उषाको अर्थ बिहान र पानको अर्थ सेवन गर्नु भन्ने हुन्छ । अर्थात् बिहानै मुख कुल्ला नगरी पिउनु भन्ने हुन्छ । हाम्रो आमाशयको क्षमता ६०० मिलीलिटर हुन्छ । आमाशयको क्षमता डबल बनाउँदा सवा १ लिटर हुन्छ अर्थात बिहान ३(४ गिलास पानी (बच्चाले दुई गिलास) मनतातो वा चिसो पिउनुलाई उषापान भनिन्छ । बिहान उठ्नेबित्तिकै खाली पेटमा मुख कुल्ला नगरी मुखमा भएको ¥यालसहित निल्ने गरी पानी पिउने गर्नुपर्छ, यसले मानिसलाई बल, स्वास्थ्य,
आरोज्ञ, शीतलता प्रदान गर्छ । पचेको मल र मृत तन्तुलाई समेत बाहिर पठाइदिन्छ । उषापान स्वस्थ्य जीवनको प्रमुख आधार हो, जसले शरीरका प्रायः सम्पूर्ण रोग निर्मुल पार्ने काम गर्छ । रगतको गाढापन कम गरी हृदयघातलाई न्यून गर्छ । यसले आमाशय तथा आन्द्राको भित्तामा रहने म्युकस तथा डेडसेल समेत बाहिर
(ट) खानेपानी महासंघले बाँकेमा काम गर्दै गर्दाका चुनौतीहरु के छन् ?
कुनैपनी काम गर्दा समस्या र चुनौतीहरु हुन्छन् नै हाम्रो उदेश्य भनेकै आम उपभोक्ताले शुद्ध पानी पिउनुर्छ भन्ने हो । विभिन्न कठिनाई र चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै हाम्रो संघ अगाडी बढेको छ । शुद्ध पिउने पानीका लागि तिव्र गतिमा सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दायित्व कम बोध गरिदिएको अवस्था छ । शुद्ध पिउनेपानीबाट बञ्चित हुँदा आम नागरिकहरु विभिन्न किसिमका रोगहरुले ग्रसित भएर औषधी उपचारमा लाखौँ रकम खर्च गर्न बाध्य छन् । हामीले आम उपभोक्तालाई सचेत गराउन जरुरी छ । उपभोक्ता पनी आफै पनी सचेत हुन आवश्यक छ । अशुद्ध पानी पिएर लाखौँ रकम अस्पतालमा बुझाउनुभन्दा समयमै शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थापनमा हामी सबै लागौँ ।
(ठ) अन्तमा तपाईका केही भन्नुछ ?
अन्तमा खानेपानी महासंघ बाँकेले गरेका गतिविधीहरुका बारेमा आम नागरिकहरुबा बिचमा पु¥याउने अवसर दिनुभयो त्यसका लागि तपाईको मिडिया परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छ । सबै उपभोक्ताहरुले शुद्ध पानी पिउने बानीको विकास गरौँ आफुपनी सुरक्षित हौँ र आफ्नो समुदायलाई पनि सुरक्षित बनाऔँ र पानीबाट हुने सबै रोगबाट बचौँ धन्यवाद ।
२७ चैत्र २०७७ मा प्रकाशित